न्यूयोर्कमा ‘राजन थपलिया डे’ घोषणा ! | रुपान्तरण
न्यूयोर्कमा ‘राजन थपलिया डे’ घोषणा !
२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार १०:३७
न्यूयोर्क । न्युयोर्कको ब्रुकलिन बोरोले न्युयोर्क निवासी चर्चित नेपाली युवा लेखक राजन थपलियाको सम्मानमा राजन थपलिया डे घोषणा गरेको छ ।
सन् २०२० को जुलाई १ लाई ‘राजन थपलिया डे’ घोषणा गर्दै ब्रुकलिन बोरोका तर्फबाट थपलियालाई विशेष सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ ।
उक्त सम्मानपत्रमा ब्रुकलिन बोरोका प्रेसिडेन्ट एरिक आडम्सबाट हस्ताक्षर गरिएको छ । उक्त दिन राजन थपलियाको सम्मानमा ‘राजन थपलिया डे’ घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै सम्मानपत्रमा भनिएको छ, ‘म ब्रुकलिन बोरो प्रेसिडेन्ट एरिक आडम्स सन् २०२० को जुलाई १ बुधबारलाई अमेरिकाको ब्रुकलिनमा राजन थपलिया डे घोषणा गर्दछु ।’
थपलियालाई बधाई ज्ञापन गर्दै बरिष्ठ गायक यम बराल, न्युयोर्कका सामाजिक व्यक्तित्व नवराज केसी र कलाकार नन्दिता केसीका साथमा खसोखासका प्रधान सम्पादक किशोर पन्थी र सम्पादक दिपक परियारले खुशी ब्यक्त गरे ।
कोरोनाको महामारीका कारण उक्त सम्मानपत्र हालैमात्र हस्तान्तरण गरिएको हो । सम्मानपत्रमा राजन थपलियाले नेपाली अमेरिकन लेखकका रुपमा गरेको योगदानको चर्चा गरिएको छ । थपलियाले झण्डै एकदर्जन अँग्रेजी भाषामा पुस्तकहरु लेखिसकेका छन् । उनका प्राय पुस्तकहरु साहित्य र आत्मप्रेरक रहेका छन् ।
थपलियाका लेख रचनाहरु विश्वचर्चित हफपोष्ट, थ्राइभ ग्लोबल र फोब्र्स मध्यपूर्व लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भइसकेका छन् । थपलिया खसोखासका अँग्रेजी सम्पादक समेत हुन् ।
एक विशेष समारोहमा न्युयोर्कका सामाजिक व्यक्तित्व नवराज केसी, खाम भट्ट, रायन लाम्गादे, खसोखासका प्रधानसम्पादक किशोर पन्थी, सम्पादक दिपक परियार, बरिष्ठ गायक यम बराल, कलाकार नन्दिता केसी, व्यवसायी कञ्चन केसी, संचारकर्मीहरु अकुर लुईटेल र बिक्की पुलामीले थपलियालाई बधाई तथा शुभकामना दिए ।
कुनै क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएका विशिष्ट व्यक्तित्वको सम्मानमा त्यस्ता व्यक्तित्वको नाममा डे घोषणा गरिन्छ । तर उक्त डे हरेक बर्ष मनाउने नभई त्यही बर्षको तोकिएको दिनका लागिमात्र घोषणा गरिएको हो ।